Michael Serrano | | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု
သင်၏လက်သည်းများကိုမည်သို့ပုံဖော်။ မည်သို့တင်ပြနိုင်ပုံကိုသိခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒါပါ လက်တွေကမင်းအကြောင်းအများကြီးပြောကြတယ်၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည်သပ်ရပ်။ ကျန်းမာနေသင့်သည်။
သင်၏လက်သည်းများကိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ထားရန်၊ ၎င်းတို့ကိုအနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် ဖြတ်၍ မှတ်တမ်းတင်သင့်သည်။ သင့်လက်သည်းများကိုမည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်နှင့်သင်၏လက်များကိုအကောင်းဆုံးထင်မြင်စေရန်မည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုရှာဖွေပါ.
2.2 အဆိုပါ cuticles Push
အကယ်၍ သင်သည်အလွန်ကိုက်သောသို့မဟုတ်ရှည်လျားသောလက်သည်းများရှိသောလူကိုတစ်ကြိမ်ထက်မကတွေ့ဖူးသည်။ မင်းကိုဘယ်လိုထင်မြင်ခဲ့တာလဲ သေချာတာပေါ့မကောင်းတဲ့, ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်လောက်မကောင်း။ အကြောင်းပြချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်လက်သည်းများကိုတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်သို့မဟုတ်အသေးစိတ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်များအားလုံးသည်အထူးသဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နယ်ပယ်တွင်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လက်သည်းထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အမျိုးသားအားလုံးအတွက်ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်သင့်သည်.
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - အချည်အနှောင်များ) နှင့်မတူဘဲလက်သည်းများသည်ချီးမွမ်းခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ပုံရိပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိရန်အလုပ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်တွင်, သူတို့သည်လုံးဝသတိမပြုမိသွားလျှင်သင်ကျေနပ်သင့်ပါတယ်။ သင်၏လက်သည်းများကိုမည်သူမျှသတိမပြုမိလျှင်သင်လုပ်နေသည်ဟုဆိုလိုသည်.
လက်သည်းများကိုအများအားဖြင့်မဖြည့်မီချုံ့သည်။ အများစုမှာလက်သည်းစောင့်ရှောက်မှု၏ဤပထမအဆင့်တွင်ကောင်းမွန်သောနည်းစနစ်ရှိသည်။ သို့သော်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသတိရခြင်းသည်မထိခိုက်ပါ။
ကောင်းသောလက်သည်းညှပ်ကိုသုံးခြင်း (သို့မဟုတ်သင် ambidextrous ဖြစ်လျှင်ကတ်ကြေး) အသုံးပြုခြင်း၊ သင်၏သဘာ ၀ ပုံသဏ္followingာန်အတိုင်းသင်၏လက်သည်းများကိုခုတ်ပါ။ ယောက်ျား၏လက်သည်းများသည်တိုသည်။ သို့သော်ရေအလွန်မရှည်ရန်သတိထားပါ၊ အကြောင်းမှာတိုတိုလက်သည်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်နာကျင်စေတတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်နောင်တွင်၎င်းတို့ကိုဖိုင်တင်နိုင်ရန်အတွက်အဖြူရောင်အနည်းငယ်ချန်ထားရန်လိုအပ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အစိုဓာတ်ကိုပျော့ပြောင်းအဖြစ်ပြုမူခြင်းနှင့်ဖြစ်စဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ ရေချိုးပြီးနောက်ချက်ချင်းလက်သည်းများကိုပြုပြင်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်.
အဆိုပါ cuticles Push
သင်သိသည့်အတိုင်းလက်သည်းသည်လက်သည်းနှင့်တွေ့သည့်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဤပါးလွှာသောအသားအရေသည်ကြီးထွားရန်နှင့်နေရာထက်ပိုမိုနေရာယူလေ့ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ cuticles ဘေးအန္တရာယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပါက, အောက်ဘက်အဖြူ၊ ကွေးနေသောနေရာကိုမတွေ့မချင်းသူတို့ကိုလှံတံ၏အကူအညီဖြင့်တွန်းချပါ.
ဆီအနည်းငယ်ကိုနှိပ်နယ်ပေးပါသို့မဟုတ်သင်၏ cuticles ပျော့ပြောင်းစေရန်မိနစ် ၂ နာရီခန့်သင့်လက်ကိုစုပ်ပါ။ cuticles မှားယွင်းစွာကုသခြင်းသည်လက်သည်း၏ဤအပိုင်း၌ရောဂါကူးစက်မှုနှင့်အခြားပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပါစေ။ နာကျင်မှုလုံလောက်လောက်အောင်သေချာတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်ပါတယ်) ။ ထို့ထက်ကား၎င်းတို့ကိုမဖြုတ်ပါနှင့်။
၎င်းဖိုင်သည်သင့်လက်သည်းများကိုအပြီးသတ်ထိတွေ့စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်၏လက်သည်း၏အစွန်အဖျားကိုစတုရန်းပုံသဏ္followingာန်သို့မဟုတ်အလှည့်ကျပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင့်လက်သည်းဖြည့်စွက်အမြဲတမ်းတူညီနေမှုရှာဖွေနေသင်အကောင်းဆုံးရလဒ်အောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်၏လက်သည်းများကိုအတိုချုပ်စစ်ဆေးပြီးပုံမှန်နှင့်ပုံသဏ္lookingာန်နှင့်ပုံသဏ္lengthာန်ကိုပုံမှန်မကြည့်နိုင်အောင်တားဆီးပေးသည့်အရာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
လက်သည်းဆိုးဆေးဖြင့်အပြီးသတ်ပါ။။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတစ်ခုကဲ့သို့ပုံစံမျိုးဖြင့်ဤကိရိယာသည်သင့်အား၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ရှင်သန်လာစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ပိုလန်များသည်လက်သည်းကို ဖြတ်၍ စီးဆင်းစေပြီးလည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးချောမွေ့စေသည်။ ဒါဟာအစကသူတို့ကိုမှတောက်ပနည်းနည်းထပ်ပြောသည်။
သင်၏လက်သည်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ဖြည့်သွင်းခြင်းသည်အရေးကြီးသော်လည်း၎င်းတို့ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့ကိုဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်းသည်မလုံလောက်ပါ။ သင်လိုအပ်သည် လက်သည်း။ ဤကိရိယာများသည်တတ်နိုင်ပြီးအလွန်လက်တွေ့ကျသည်။ သင့်ရဲ့တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးလက်နက်ကိရိယာထဲမှာလက်သည်းဖြီးထည့်ပါ လိုအပ်ရင်တိုင်းလက်သည်းများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်အဆင့်များကဲ့သို့လက်သည်းမဆေးမီလက်ကိုဆေးခြင်းသည်အလုပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေသည်။
အိမ်မှလက်သည်းများကိုဘယ်လိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်တစ်ချိန်ချိန် (သို့မဟုတ်အားလုံး) သင်အထူးပြုစင်တာတစ်ခုသို့သွားလိုသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အထီးနောက်ပြီးအဘို့အသွားကြဖို့အချိန်ကောင်းဖြစ်ပါသည် မင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့.
အထီးအထူးကုကွဲပြားခြားနားသောကုသမှုပါဝင်နိုင်ပါသည်ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့ enamelling ဟာသူတို့ထဲကတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး (သင်မတောင်းဘဲနဲ့) ။ အခြေခံဝန်ဆောင်မှုအများအားဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းသာပါဝင်သည်။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောကုသမှုများကအားကစားရုံ၌ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးနောက်သူတို့၏အသွင်အပြင်နှင့်ပျော့ပျောင်းမှုကိုပြန်လည်ရရှိစေရန်သင်၏လက်အား exfoliating and moisturizing စသည့်ဂရုစိုက်မှုပိုမိုပေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » လက်သည်းကိုဘယ်လိုချရမလဲ